Izeluleko Ezinhlanu Ezisebenzayo Zokuguqulwa Kwamaselula Okukuwinela Amakhasimende | Martech Zone
Izeluleko Ezinhlanu Ezisebenzayo Zokuguqulwa Kwamaselula Okukuwinela Amakhasimende
NgoLwesihlanu, Mashi 8, 2019 NgoLwesithathu, Okthoba 14, 2020 UJack Poyntz
Nayi i-tidbit efanele yolwazi: 52 amaphesenti omgwaqo wewebhu womhlaba wonke uvela kuma-Smartphones. Isibalo sabantu abasebenzisa omakhalekhukhwini siyakhuphuka. Yilapho iningi labantu lithola khona imikhiqizo noma izinsizakalo zakho.
Amabhizinisi kufanele asebenzise izixazululo zawo zewebhu ezihamba phambili ukuze afike ngaphambi komdlalo. Yisiteshi esiyinhloko lapho abantu abaningi beya khona ukuyothenga ikhofi eliseduze, usonkontileka ongcono kakhulu wokufulela, nanoma yini iGoogle engayifinyelela.
Kepha ngaphandle kwesixazululo sewebhu esiphathekayo nesakhiwe kahle sebhizinisi lakho, kunzima ukuncintisana nabanye. Ebhizinisini le-e-commerce, ngokwesibonelo, kwatholakala ukuthi Amaphesenti angama-55 wabathengi bathenga lapho bethola umkhiqizo ngocingo lwabo oluphathekayo.
Ungasali ngaphandle! Nawa amathiphu ama-5 asebenzayo wokusebenzisa kangcono ukwandisa izinga lakho lokuguqulwa.
1. Isayithi Lokulayishwa Kwamasayithi Okuhamba Phambili Yikho Okuhamba Phambili Kuwe
Ijubane linendaba uma kukhulunywa ngamasayithi weselula.
Empeleni, ucwaningo lukhombisa ukuthi amawebhusayithi weselula alayisha imizuzwana emi-5 noma ngokushesha angakhipha ukuthengisa okuphezulu kunalawo ahamba kancane. Abomdabu be-inthanethi ababekezeleli isivinini sokulayisha kancane. Kuthathwa njengesiqalekiso kuwebhusayithi yakho ephathekayo.
Ngenhlanhla, ungenza izindlela eziningi zokulungisa le nkinga.
Nciphisa izengezo kuselula yakho. Inani lezicelo zeseva kuwebhusayithi yakho lingathinta kakhulu isivinini salo. Ngabe usebenzisa ama-tracker amaningi noma amathuluzi wokuhlaziya? Bheka ingaphakathi lesoftware yakho; mhlawumbe ungathola inkinga lapho.
Ungalokothi ukhohlwe mayelana phezulu kuya phansi ukuxilongwa. Mhlawumbe amanye amafayela adala umonakalo kusistimu yakho. Amafayela amakhulu afana nokuqukethwe okubukwayo anganciphisa kakhulu isivinini sakho sokulayisha. Ngakho-ke, ungahle uthande ukunciphisa amafayela akho kuwebhusayithi yakho. Izithombe, i-ad-tech, nenombolo yefonti yizigebengu ezijwayelekile kulokhu.
Funda mayelana sokuqukethwe okudinga ukubekwa phambili. Kubeke phezulu ekhasini lakho, okufanele lilayishe kuqala ngaphambi kwenye into ekuwebhusayithi. Lelisu lingakhuphula isivinini sakho sokulayisha ngenkathi ucabangela i-UX yesipiliyoni somsebenzisi wesayithi.
2. Khetha idizayini ephendulayo ukuze ube Mobile Ready
Idizayini ephendulayo yeselula kunzima ukuyakha. Kuzofanele uzivumelanise nosayizi abahlukile besikrini. Kepha ukufuna akugcini lapho. Kufanele futhi ucabangele ukuma kwefoni okuhlukile nepulatifomu.
Ungagxila kuzinkinobho zokuhamba kalula. Amamenyu noma izigaba kufanele kube lula ukuzichofoza. Ikhasi ngalinye kufanele linikeze umsebenzisi izinkomba ezicacile zokuthi angaya kuphi lapho efuna ukufeza okuthile njengokungeza into enqoleni, ukukhansela izicelo, noma ukuhlola ama-oda.
Ukuhlelwa komklamo kufanele kube okuguqukayo. Kufanele ifake amandla ezinqumo zokubhala, izithombe, nosayizi wevidiyo. Khumbula nje, izixazululo zeselula kufanele zibekwe phambili. Amakhasi angapheli, imibhalo emikhulu, nokuqukethwe okubukwayo okubanzi kungukuvalwa okuphelele kwezivakashi zakho.
3. Susa ama-Pop-ups namavidiyo wabasebenzisi abangadingekile
Lezo zikhangiso ezihluphayo nezikhangiso zamavidiyo kungonakalisa ukwakheka kwakho kwewebhu jikelele, bese kuthi nezinga lokuguqulwa kwakho.
Akunandaba noma ngabe i-web design yakho ephathekayo ilunge kangakanani, ukusebenzisa ama-pop-ups amaningi kunganciphisa kakhulu i-UX nokwaneliseka kwamakhasimende, okuholela ezingeni eliphansi lokuguqulwa.
Esikhundleni sokwenza ukuhola okuningi, cishe uzothola isilinganiso esiphakeme sokuncipha nokwehla kwethrafikhi. Empeleni, ngokocwaningo olwenziwe yi Ukuhlanganiswa kwezikhangiso ezingcono, ezinye zezinhlobo ezizondwa kakhulu zesikhangiso seselula yilezi ezilandelayo:
Amavidiyo adlala ngokuzenzakalela
Izithombe ezilokhu zikhanya
Izikhangiso ezinokubalwa phansi ngaphambi kokuxoshwa
Amakhasi ewebhu angamaselula anezikhangiso ezingaphezu kwezingu-30%
4. Kwenze Kubelula Ngokungena Okungenamthungo
Ukushiya i-Checkout akuyona into engavamile. Isizathu silele ekwakhiweni okungalungile kwekhasi lokuphuma. Kunezici eziningi zokuthi kungani amakhasimende eshiya imikhiqizo enqoleni yokuthenga ngaphandle kokuyithenga empeleni. Imvamisa, abakwazi ukuthola inkinobho efanelekile ukucindezela, noma ikhasi liyinkimbinkimbi kakhulu ukuhamba.
Ngakho-ke, ikhasi lokuphuma kufanele ligcinwe lihlanzekile futhi lincane. Isikhala esimhlophe nokusabalalisa izinyathelo emakhasini amaningi kuzosiza. Izinkinobho kufanele zifake ikhasimende ku-oda elifanele lenqubo yokuphuma.
5. Faka ezinye izindlela zokukhokha
Isigaba sokuphuma yiphuzu lapho ungaguqula izivakashi zibe amakhasimende wangempela. Ngakho-ke, kufanele ilungiselelwe ukuthengiselana okushelelayo nokuguqulwa okuphezulu.
Ungalindeli ukuthi wonke amakhasimende akho azosebenzisa i-PayPal ukukhokhela ama-oda awo.
Ibhizinisi le-e-commerce kufanele njalo licabangele ukuguquguquka. Ngaphandle kwamakhadi esikweletu noma izinkokhelo zasebhange, ungahle uthande ukungeza i-Apple Pay, futhi iGoogle ikhokhele iziteshi zokukhokha kuwebhusayithi yakho. Isikhwama sedijithali siyavela kancane, amabhizinisi e-commerce okufanele abone kusengaphambili futhi asizakale ngawo.
Njengoba ama-smartphones aqhubeka nokubusa umhlaba, amabhizinisi kufanele afunde ukuzivumelanisa nezimo.
Kunamathuba amaningi okugcinwa esiteshini esihambayo. Konke okudingekayo ukwakhiwa okuhle nokwenza kahle njalo. Gcina amakhasimende akho ajabule ngesisombululo sakho sewebhu ngokwenza konke kuhleleke kahle.
Kepha kunendlela engcono yokwenza izinto. Ungathola usizo kochwepheshe. Ukusebenziseka kweselula kungaba nzima, kepha ngosizo lwe-web design uDerry ungakwenza konke nge-finesse. Futhi, ungonga isikhathi ukugxila kwezinye izingxenye zebhizinisi lakho.
Tags: ividiyo edlala ngokuzenzakalelaumfelandawonye wezikhangiso ezingconoCountdown izikhangisoukuguqulwa kweselulanokwenza kahle kweselulaokuzivelelayo kweselulaisivinini seselulaisivinini sewebhusayithi yeselulaukuphuma okungenamthungo
UJack Poyntz Studio iyinkampani yokwakhiwa kwewebhu kanye nochwepheshe beShopify Certified. Bagxile ekunikezeni izixazululo zewebhusayithi yokudala ukusiza izinkampani ezinamabhongo zikhule online. Bamukela izinselelo ezintsha ngesifiso sokusiza amaklayenti abo athole impumelelo.
Amamethrikhi Omcimbi Osemqoka Izikhulu Zonke Kufanele Zilandele
10 Amathuluzi Okubhala Okuqukethwe Okumangalisayo Wokumaketha Okumangalisayo